Izindawo zokungcebeleka zaseBeaches® Zifuna Ukwenza Ugogo Nomkhulu Wakho Inkanyezi elandelayo yeTikTok
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba ze-Hotel & Resort » Izindawo zokungcebeleka zaseBeaches® Zifuna Ukwenza Ugogo Nomkhulu Wakho Inkanyezi elandelayo yeTikTok
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindawo zokuhlala • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Amabhishi Resorts wethula uhlelo olusha lweGrandEscapes olwenzelwe ikakhulukazi amaholide ogogo nomkhulu ngemuva kwesikhathi esichithwe ngaphandle.
Izindawo zokungcebeleka iBeaches®, okuyinkampani ehamba phambili yokunethezeka ebandakanya wonke umndeni, imemezela ama-sweepstake abo amasha ukusiza ukudala "i-granfluencer" enkulu elandelayo kuTikTok.
Le ndawo yokubungaza umndeni inika isipho seholide lamaphupho kanye nesifundo se- "Granfluencer" ku-TikTok futhi igubha ukunikezwa kokuvakasha okusha kwe-GrandEscapes.
Izindawo zokungcebeleka emabhishi zifuna ukujabulisa ogogo nomkhulu kanye nabazukulu bazo ku-inthanethi, nokuhlanganisa imindeni enwetshiwe mathupha.
Amabhishi amaGrandEscapes enzelwe ikakhulukazi amaholide kagogo nomkhulu epharadesi ngemuva kwesikhathi eside kangaka behlukene.
Ugogo oyedwa onenhlanhla uzowina okokufundisa kweTikTok komunye wamagranfluencers aziwa kakhulu endaweni yesikhulumi, @siphokuhleb, lapho bazofunda khona ukuthi yini edingekayo ukwenza iTikTok ibe yigciwane futhi ingene ekhasini elithi 'For You Page' phakathi nohambo lwabo oluya eBeaches Resort.
Manje kuze kube nguNovemba 11, 2021, amalungu omndeni angathumela ividiyo yeTikTok kagogo noma umkhulu wabo ithuba lokuwina okokufundisa kweTikTok kanye neholidi lamaphupho obusuku obuyisihlanu nganoma yisiphi isikhathi Amabhishi Resort eTurks & Caicos or Jamaica. Ukufaka ama-Beaches GrandEscapes amaswidi, abadali kumele balandele futhi bamake @BeachesResorts ku-TikTok futhi kufaka phakathi i-hashtag #BeachesGrandEscapes kwividiyo yabo yokuthunyelwe kogogo nomkhulu babo abadansayo, becula noma begxuma kumkhuba wakamuva.
Akukhona nje ukuthi amaBeach Resorts afuna ukudala ukuzijabulisa kogogo nomkhulu nabazukulu babo ku-inthanethi, kepha ukuhlanganisa kabusha imindeni enwetshiwe mathupha kuyinto ephezulu ohlwini. Ngaphezu kwethuba lokuwina iholide lamaphupho ngeTikTok, inkampani yezokuvakasha iyethula Amabhishi amaGrandEscapes, yakhelwe ikakhulukazi amaholide kagogo nogogo nomkhulu epharadesi ngemuva kwesikhathi eside kangaka behlukene. I-GrandEscape yamabhishi ilungele noma ngasiphi isikhathi sonyaka, kodwa isikhathi esilinganiselwe, kunesikhuthazo esikhethekile sokubekisa ubusuku obuyisihlanu noma ngaphezulu, okwenziwe manje kuze kube nguJanuwari 9, 2022, we-Fall travel 2022. Ukubhuka ngaleso sikhathi kuzothola okhethekile “ Yenzelwe i-Memories ”isithombe sezithombe zomndeni nokukhethwa kwesidlo sasekuseni seSesame Street Character sasekuseni, iRed Lane® I-spa manicure yababili, noma i- "Kitty Katt" Catamaran Cruise yezimbili umndeni wonke ongahlanganyela kuzo futhi uzijabulele.
“Emabhishi isikhathi somndeni siyikho konke. Siyawubona unyaka obunzima, ikakhulukazi ogogo nomkhulu abaningi ezikhathini zamuva abebengakwazi ukubona abazukulu babo kaningi noma, kwezinye izimo, nhlobo. Sifuna ukuthi imindeni ibuyisele lezo zikhathi ezingekho, nokuthi yikuphi okungcono okwenziwe ngemuva kwalokho kunaseCaribbean yethu enhle, ”kusho uJoel Ryan, onguMqondisi weTeema Entertainment eBeaches Resorts. "Inhloso yethu ukuthi imindeni idale izinkumbulo ezihlala ndawonye ndawonye, ​​futhi ngenxa yokuthi izindawo zethu zokungcebeleka zinokuthile kwawo wonke umuntu, amaGrandEscapes ethu ayindlela eqinisekile yokubuyisela uGrand Grandparent."
Amabhishi yindawo yokugcina yeholide yokuthi ogogo nomkhulu nabazukulu baqhubeke nokubopha, kufaka phakathi ubumnandi nobunye njalo, kuyo yonke iminyaka. Izingane zingaluthokozela ulwandle futhi IPirates Island Waterpark emini, bese uya ku-Xbox® Ihholo laseLounge noma lamabhishi elithandekayo ebusuku. Izingane ezincane kunazo zonke zingadla ngisho nemisebenzi ngezintandokazi zazo ISesame Street®abalingiswa futhi bajabulele ukuzijabulisa emini nasebusuku nabangane babo abanoboya. Eminye imisebenzi yokuzikhethela ifaka phakathi uhlelo lwe-scuba lwengane ngezifundo eziqeqeshiwe ze-Scuba Divers kanye ne-junior golf club izifundo ezizimele nemitholampilo.Abantu abadala babo bonke ubudala bangajabulela izindawo zokudlela eziningi nemigoqo eyingqayizivele, ezemidlalo zomhlaba nezamanzi, i-Red Lane® Spa nokuningi, okwenzela uhambo olulodwa, oluhlanganisa konke olufanele kuwo wonke amalungu omndeni.
Ukufaka ama-GrandEscapes Sweepstakes, vakashela amabhishi.com/ibhishigrandescapessweepstakes. Ukubhuka ukuvakashelwa kwesikhuthazo seholide seGrandEscapes beaches.com. Ngemininingwane engaphezulu mayelana neholide elibizayo elibandakanyiwe® emabhishi, vakashela beaches.com.
Izindawo zokuhlala zeBeaches®:
Njengoba kunezindawo ezintathu ezibabazekayo eTurks & Caicos naseJamaica, nendawo yesine eza eSt. Vincent naseGrenadines, iBeaches® Resorts iyona ndlela yokuphunyuka ekugcineni kwawo wonke amalungu omndeni. Amabhishi Resorts ahlinzeka ngokufakwa kwekhwalithi ethe xaxa kunanoma iyiphi enye inkampani yezokuvakasha emhlabeni enama-waterpark ahlasimulisayo, i-XBOX® Play Lounges, ama-Kids Camps akhethekile, ama-nightclub wentsha, ama-Nannies aqinisekisiwe, insizakalo ye-Butler, i-Red Lane® Spas, ama-Aqua Centers anesitifiketi noqeqesho lwe-PADI® , kanye ne-Wi-Fi yamahhala. Njengomxhasi oziqhenyayo weSesame Street, amaBeach Resorts anikela futhi ngeCaribbean Adventures neSesame Street®, lapho izingane zingachitha khona iholide labo nabangane bazo abazithandayo abavela eqenjini leSesame Street ngemisebenzi yansuku zonke nemibukiso yasesiteji masonto onke. Izindawo zokungcebeleka emabhishi ziyindawo ekahle yokuhlangana kwemindeni kusuka ekuhlanganeni kanye nasezinsukwini zokuzalwa ezikhethekile kuya ohlelweni lomshado wesiginesha lapho uya khona, Imishado Yasebhishi Enziwa Ngokwezifiso. Amabhishi Resorts aqinisekisa izivakashi ukuthula kwengqondo kusuka ekufikeni nasekuhambeni nge-Beaches Platinum Protocols of Cleanness, izinyathelo ezithuthukisiwe zezempilo nezokuphepha ezenzelwe ukunika izivakashi ukuzethemba okukhulu lapho ziyovakasha eCaribbean. Amabhishi Resorts ayingxenye yeSandals Resorts International (SRI) ephethwe ngumndeni, esungulwe nguGordon “Butch” Stewart ongasekho, okubandakanya izindawo zokungcebeleka zeLuxury Included® Sandals Resorts, futhi iyinkampani yezokuvakasha ehola phambili eCaribbean. Ukuthola eminye imininingwane ngama-Beaches Resorts, vakashela beaches.com.